Posted by ZT at 12:43 AM
ဘာပဲပြောပြော တစ်ရုပ်လောက်တော့ လိုချင်မိသား...ဟိဟိ
weekly 11 မှာပါတဲ့ မြန်မာပြည်က ဂျီတီအိုင် ဆရာကြီးတစ်ယောက်လုပ်သွားတဲ့ မော်တော်ကား ဆေးမှှုတ် တဲ့ စက်ရုပ်ဆိုတာ ဘယ်လိုဟာလဲမသိဘူး နော...။ (ဘာရယ်မဟုတ် ခေါင်းထဲပေါ်လာတာဝင်ပြောခြင်း)..။
မခိုင်းရပဲ အလိုအလျောက် အိမ်အလုပ်တွေ...လုပ်ပေးမယ့်စက်ရုပ်ပဲ လိုချင်တယ်တော့
စက်ရုပ်ဆိုတာဒီလိုကိုး၊ ရုပ်ရှင်ထဲတော့ တော်မှတော်ပဲ:)
Wall-E လောက်တော့မှီအုံးမှာပါ :P
Nice post. So impressive. Thank you.
လိုချင်တယ် အဲ့လို စက်ရုပ်.... အပျင်းပြေပေါ့... း)
Before I read this post, I hate the Robots. Now I dont hate. Because of your paragraph(8). Thanks
ကိုဂုတ်တီ အဲလေ ကိုဇက်တီ ဝယ်ချင်တာ ဝယ် နောက်ကျနေ ပိုက်ပိုက်ထုတ်ပေးတဲ့ စက်ရုပ်လေး တစ်ရုပ်လောက် လက်ဆောင်ပေးပါလားဟင်။ ဟိဟိ
မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ မရှိပါ. မသိသေး မလုပ်တတ်သေးတာ အဖြေမရှိသေးတာဘဲ ရှိပါတယ်လို့ခံယူပါတယ်။
ဒါဆို လဲ စိတ်အေးလက်အေး ပဲ မမျှော်တော့ ပါဘူး..
စက်ရုပ်ကလေးကို မွေးစားအမေက သူ့သားနေပြန်ကောင်းလာတော့ စွန့်ပစ်တဲ့ ကားကြည့်ပြီးထဲက လူလို ခံစားတက် တဲ့ စက်ရုပ် မလိုချင်တော့ ပါ..
စက်ရုပ်နည်းပညာအကြောင်း ဖတ်သွားပါတယ် ကိုZTရေ
ဟိုအရင်မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ ဖတ်ဖူးတဲ့ စက်ရုပ်အကြောင်း ဟာသဝတ္ထု လေးအကြောင်းတောင် သတိရသွားတယ်
တို့လည်း စက်ရုပ်နဲ့ နည်းနည်းပါးပါး အလုပ်လုပ်နေပါသည်။
စပင်နိုဗက်ကျ ခေါ်ကြွားဦးမည် စိတ်ကူးလေးတွေ....
ဒန် တန် တန် တန်